Horudhac: Valencia vs Barcelona… (Blaugrana oo eegeysa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Granada) – Gool FM
Horudhac: Valencia vs Barcelona… (Blaugrana oo eegeysa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Granada)
(Valencia) 02 Maajo 2021. Barcelona ayaa isha ku heysa inay ka soo kabsato guuldarradii Khamiistii ka soo gaartay Granada, marka ay sii wadayaan ololahooda horyaalka La Liga, iyagoo marti u noqonaya kooxda Valencia Axadda caawa.
Kooxda Tababare Ronald Koeman ayaa iska lumisay fursad ay ugu dhaqaaqi lahayd hoggaanka horyaalka La Liga, waxaana taasi ay ku hoggaamisay inay saldhigato kaalinta saddexaad, haatan waxa ay doonaysaa Blaugrana ka soo kabato guuldarradii soo gaartay.
Dhinaca kale Kooxda Valencia ayaa haatan fadhisa kaalinta 14-aad, waxaana ay doonaysaa inay kulammada ugu dambeeya horyaalka La Liga ay guulo gaarto si ay ugu soo dhaqaaqdo kaalimaha sare ee horyaalka Spain.
Garoonka: Estadio Mestalla
Thierry Correia ayaa shaki laga galinayaa kulankan kooxda Valencia sababo la xiriira dhaawac jilibka ah, haddii uusan taam noqon, Daniel Wass ayaa dib loogu yeeri karaa.
Jasper Cillessen ayaa u muuqda inuu taam u noqon doono kulankan kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah, waxaana uu ka soo muuqan karaa goolka kulanka uu wajahayo kooxdiisii hore.
Goncalo Guedes iyo Maxi Gomez ayaa hoggaaminaya weerarka kooxda Los Che.
Ousmane Dembele ayaa taam buuxa u ah Kooxda Barcelona, laakiin Antoine Griezmann ayay u badan tahay inuu sii haysan doono ku billaabashada safka hore ee Kooxda martida ah.
Sergino Dest ayaa la filayaa inuu booska garabka midig ee daafaca ka haysto Sergi Roberto kulanka caawa.
Pedri ayaa ku soo laaban kara bartamaha khadka dhexe ee kulankan, halka la filayo in Clement Lenglet uu dib ugu soo laabto daafaca.
>- Valencia ayaa guuleysatay kaliya hal jeer sagaalkeedii kulan ee ugu dambeysay oo ay horyaalka La Liga ku wajahaday Barcelona, waxaana ay ka haystaan 4 Babraro iyo 4 Guuldarro, inkastoo ay ciyaartaasi ahayd kulankii xilli ciyaareedkii hore oo ay 2-0 kaga adkaadeen.
>- Los Che ayaan marnaba guuleysan kulammo isku xiga iyadoo garoonkeeda ku wajahaysa kooxda Catalan tartankan tan iyo sanadkii 2007, markaasoo ay ka hoos ciyaarayeen Quique Sanchez Flores.
>- Barcelona ayaa guul la’aan ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay Mestalla, waxaana ay garoonkaas kala soo laabtay saddexdaas kulan 2 Barbaro iyo 1 Guuldarro, waana heerkeedii ugu xumaa oo ay guul la’aan tahay inta ay booqato Valencia tan iyo bishii April ee sanadkii 1992-kii, markaasoo ay kala soo laabatay 3 Barbaro iyo 2 Guuldarro.
>- Valencia ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga, waxaana ay haysataa 4 Guul iyo 4 Barbaro.
>- Barcelona ayaa gool dhalisay mid kasta oo ka mid ah 25-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga, waxaana ay muddadaas dhalisay 62 gool, waana heerkeedii gooldhalineed ee ugu fiicnaa hal xilli ciyaareed horyaalka, tan iyo bishii June ee sanadkii 2013-kii, markaasoo ay 38 kulan ku dhaliyeen 115 gool.
Horudhac: Manchester United vs Liverpool... (Xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka ka dhacaya Old Trafford)